Mogadishu Journal » Beesha caalamka oo cadaadis ku saartay Muuse Biixi in uu bedelo go’aan uu hore u gaaray
Mjournal :-Cadaadis kaga yimid beesha caalamka ayaa qasabtay in Madaxweynaha Maamulka Somaliand Muuse Biixi uu bedelo mowqifkiisii ahaa inuu hakad geliyo wadahadaladii Dowlada Federalka.
Sarkaal u hadlay maamulka Somaliland ayaa sheegay in wafdi ka socda midowga Yurub ay kulamo kula yeesheen magaalada Hargeysa madaxda u sareysa maamulkaas ayna ka dalbadeen in la wadahadlo.
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi oo bishii hore ku dhowaaqay in uu joojiyay wadahadaladii maamulkiisu uu la lahaa dowlada federalka ayaa haatan aqbalay in uu ka noqdo mowqifkiisii hore isla markaana uu diyaar u yahay wadahadalo.
Go’aanka uu ku joojiyay wadahadalada ayaa waxaa ka soo horjeestay hogaamiyaha mucaaradka Feysal Cali Waraabe.
Howlgallo ka socda Baydhabo